Shiinaha Parallel Slide Valve oo loogu talagalay warshada nidaamka uumiga-biyaha iyo soo saarayaasha | Convista
Isbarbardhigga Isbarbar dhigga ee nidaamka biyaha uumiga
Nooca Gate Madax
Cadaadis PN20-50MPa 1500LB-2500LB
Ballaca Magaca DN 300-500
Waxaa loo isticmaalaa sidii qalab furitaan iyo xirid loogu talagalay nidaamka bamgareynta ama nidaamyada kale ee tuubbada cadaadiska sare iyo kuwa dhexe ee 600 ilaa 1,000MW marawaxada uumiga ee heer sare ah (heer sare ah).
1.Waxay qaadataa cadaadiska qaab-dhismeedka is-daboolida, oo leh isku xirnaanta alxanka labada dhinacba.
2.Waxay qaadataa waalka korantada ee korontada laga soo galo iyo kan laga baxo si loogu dheellitiro cadaadiska kala duwan ee laga soo galo.
3Farsamadeeda xirmeysa waxay aqbashaa qaab-dhismeedka laba-labbo isbarbar socda. Dareemida waalka waxay ka timaaddaa cadaadiska dhexdhexaadka ah halkii laga saari lahaa xoog jireed farsamo si looga ilaaliyo waalka inuu ku dhaco xiisad khatar ah inta lagu jiro furitaanka iyo xiritaanka.
4.Iyada oo aluminium adag oo aluminium ah oo isku-dhafan lagu sameeyo cobalt-ka, wajiga daboolku wuxuu leeyahay astaamo heerkulka sare, caabbinta daxalka, iska caabinta abrasionka, nolosha adeegga dheer iyo astaamo kale.
5.Marxaladda daaweynta ka-hortagga iyo daaweynta nitrogenization, dusha sare ee dusha sare ee qalabka ayaa leh caabbinta daxalka wanaagsan, iska caabbinta xoqida iyo sanduuqa shay lagu kalsoon yahay
6.Waxay la jaan qaadi kartaa aaladaha korontada ee kala duwan ee gudaha iyo kuwa la soo dhoofiyo si loo buuxiyo shuruudaha xakamaynta DCS loona ogaado hawlgallada fog iyo kuwa gudaha.
7.Si buuxda ayaa loo furi doonaa ama la xidhi doonaa inta lagu jiro hawlgalka. Looma isticmaali karo inay tahay waardiye hagitaan ah.
Hore: Xilliga Guga nooca ceelka badbaadada oo buuxa (W taxanaha)
Xiga: Trunnion bir been abuur ah oo si buuxda loogu dhejiyay Ball Ball Valve
Guga xiran xamuul buuxa nooca pressu sare ...
3226 AWWA C509 NRS Qalabka Fadhiga Adkaysiga leh
3233 AWWA C515 OS&Y Albaabka Fadhiga Adkaysi ...
Bellows waalka badbaadada
MA Taxanaha Mashiinka Xakamaynta Mashiinka
LVP Wareegtada Vacuum Biyaha